इन्टरनेट फास्ट बनाउन एल्मुनियम फोइलको आइडिया कति सही ? || तातोखबर डट कम
इन्टरनेट फास्ट बनाउन एल्मुनियम फोइलको आइडिया कति सही ?
तातोखबर 2019-02-19 14:40:41 सूचना / प्रविधि
हुन त यो तरिका निकै पुरानो हो तर यदि यसको विज्ञानले पनि पुष्टि गर्छ भने राम्रै हो ।
घरमा वाइफाईको राम्रो सिग्नलका लागि एल्मुनियम फोइल प्रयोग गर्न सकिन्छ किनभने यो मिथ अब लोकप्रिय भइरहेको छ ।
युनिभर्सिटी अफ डार्टमाउथका शोधकर्ताका अनुसार राउटरको एन्टिनाको चारैतिर एल्मुनियम फोइल लगाउँदा वाइफाईको सिग्नल राम्रो हुनसक्छ । साथै नेटवर्कको बाधालाई पनि कम गर्छ र तपाईंको कनेक्शनलाई पनि सुरक्षा दिने गर्दछ ।
घरमा राउटरको एन्टिना सबै दिशाका लागि हुन्छ अर्थात् सिग्नल छरिएको हुन्छ ।
डार्टमाउथ इन्जिनियर भन्छन्, ‘राउटरमा एल्मुनियम फोइलको प्रयोग गर्दा यसले घरमा वायरलेस संरचनाको क्षमता विकास गर्छ किनभने यसले घरको इन्टेरियर डिजाइन, विभाजन र अन्य बाधाहरुको प्रभावलाई कम गर्ने गर्छ । ’
एल्मुनियम फोइल लगाउँदा सिग्नल एक दिशामा काम गर्न थाल्छ ।
त्यसकारण राउटरमा एल्मुनियम फोइल यसरी लगाउनुहोस् कि त्यो कोठातर्फ नै इंगित होस् ।
यद्यपी, दोस्रो कोठामा यसको सिग्नल आउँदैन तर तपाईंले चाहेको ठाउँमा भने पक्कै आउनेछ ।
केही स्थानमा सिग्नल रोक्नुको फाइदा पनि छ जस्तै यसलाई सिसातर्फ जानबाट रोक्न सकिन्छ ता कि सिग्नल फिर्ता नहोस् र तपाईंको कनेक्शनले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकोस् ।
सिग्नललाई दिशा दिँदा बाधा त कम हुन्छ नै यसले तपाईंको वाइफाईलाई सुरक्षा पनि दिन्छ ।
एल्मुनियम कभरेजमार्फत सिग्नललाई ती मानिससम्म पुग्न दिँदैन जसले तपाईंको वाइफाई चोर्न चाहन्छन् वा कुनै साइबर हमलाबाट तपाईंको कनेक्शन चोरी गर्न चाहन्छन् ।
डार्टमाउथ शोधकर्ताले यो घरेलु तरिकालाई अर्को स्तरसम्म पुर्याएका छन् । उनीहरुले थ्री डी मोडल प्रिन्ट सिस्टम बनाएका छन् जसले तपाईंको सिग्नलाइए त्यही इंगित गर्छ जहाँ तपाईं चाहनुहुन्छ । थ्रीडी प्लास्टिक प्रिन्टलाई एल्मुनियम फोइल लगाएपछि यो तयार हुन्छ ।
सुन्दा साधारण लाग्छ तब हामीमध्ये धेरैसँग थ्रीडी प्रिन्टर हुँदैन । त्यसकारण धैर्य र रचनात्मकता साथ धेरै खर्च नगरी हामीले आफै एल्मुनियम प्यानल बनाउन सक्छौं र सिग्नलको समस्या समाप्त गर्न सक्छौं ।
‘हेटौंडामा घर पर्यो हाम्रो’ले युट्युबमा फड्को मार्दै
हेटौंडा, २१ जेठ÷ लोकतथा दोहोरी गायक नवराज न्यौपानेको दोश्रो सांग�.........
बिमस्टेकमा हस्ताक्षर गरेको भारतले नेपालको बिजुली किन्ला ?
काठमाडौं, भदौ, १५ / बिमस्टेक राष्ट्रहरुबीच विद्युत प्रसारण लाइन सञ्जाल .........
कावासोतीमा बम बिष्फोट, जनजीवन त्रसित
कावासोती, ५ बैशाख । नवलपुरको सदरमुकाम कावासोतीको मुख्य बजारमा नै .........